Global Voices teny Malagasy » Tontolon’ny Bilaogy Hindi: Fitsidihana, Aretimifindra “Fanamarihana” & Indibloggies! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Aogositra 2017 15:15 GMT 1	 · Mpanoratra Amit Gupta Nandika miora
Sokajy: Amerika Avaratra, Azia Atsimo, India, Italia, Kanadà, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika, Siansa, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
Mahatsiaro voadona amin'ny sehatra ara-piarahamonina sy ara-pôlitika amin'izao fotoana izao i Rachana, ary manome fijery maneso ao amin'ny lahatsorany vaovao ho avy , raha mandinika kosa i Jagdish: Yahoo ve no mamonjy ny Hindi sa ny Hindi no mamonjy ny Yahoo ! Tsy lavitra ao aorian'izany koa i Jitu izay milaza amin’ny rehetra momba ny lalao Hindi Portal , izay ametrahany famantarana momba ny mety hiavian’ny Hindi Portal avy amin'ny Google !! Etsy andaniny, nirary tsingerintaona feno fifaliana  sy andro lava iainana ho an’i Jagjit Singh, ilay mpanjakan'ny Gazal, i Neeraj. Mbola mitohy ny fikarohan'i Srijan Shilpia ny marina momba ny fahafatesan'i Netaji, araka ilay lahatsoratra navoakany farany. Namahana ny bilaoginy kosa i Ravi Ratlami tamin'ny fanoratana momba ny Fitsipi-pitondrantena amin’ny Fitantanana Bilaogy sy ny Aretin’ny Tunnel Carpal . Tsia, tsy mikasika ilay toe-pitsaboana  izy io fa fijery mampihomehy ny toe-javatra avy amin'ny fiankinandoha amin’ny bilaogy!! Notohizany izany tamin’ny famaliana ireo Fanontaniana Be Mpametraka momba ny fitantanana bilaogim-barotra  na ny famahanana bilaogy ahazoana tombony. Ary tsy lavitra tao aoriana i Tarun, izay naneho ny heviny momba ilay resaka .
Izaho manokana dia mahalana vao miresaka momba ny lohahevitra mavesatra toy itony, ka rehefa nomarihan’ i Ben  aho (tsy avy ao amin'ny Tontolon'ny bilaogy Hindi), dia nanapa-kevitra ny hanely io aretina io ao amin'ny tontolon’ny bilaogy Hindi ary raha ny fiheverako azy dia nahomby ny tetiko satria dia bilaogera 5 no efa tratran’ity valanaretin'ny fanamarihana ity ary mbola maro ireo bilaogera antenaina ho tratrany. Nefa tsy hifarana eo izy io satria dia nomarihan’i Alka  indray aho ary raha vao hitako fa mihena ny onjan’ilay fanamarihana teo aloha dia hamorona onja lehibe kokoa indray aho avy amin’ny fanipazana ity vato hafa fanamarihana ity!! 😉
Nentin’i Ashish tany ankoatra ny Volana izahay tanatin'ny Apollo 8 , na, raha ny marimarina kokoa, notantarainy anay ny momba ilay iraka nataon'ny Apollo 8 tany amin'ny Volana, ilay hazakazaka haingana indrindra vitan’ny olona (mandraka izany andro izany) tanatin'ny Apollo 10  ary ilay dingana lehibe tanatin'ny iraka Apollo 11 . Efa miresaka momba ny fitsidihana toerana ihany isika, maninona moa raha miaina kely an’izany tanàna fahinin’i Ajmer izany amin'ity fanohizako ny tataram-pitsidiako an'i Ajmer sy Pushkar  ity!! Ny alina nialoha ny Andron'ny Mpifankatia, nampahafantatra ny rehetra mikasika ny Andron'ny Mpifankatia sy ireo tranga ara-tantara mahaliana momba izany  i R.C. Mishra, monina ao Italia.
Zara raha misy andro ray tsy ahitàna resaka pôlitika, efa lasa anisan'ny sakafo hanina isan'andro toy ny vitaminina fanampintsakafo izy ity. Raha tsy misy resaka pôlitika mihitsy mandritra ny tontolo andro dia mahatsapa toy ny hoe tsy misy sakafo holevonina izany ao anatin'ny vavony! 😉 Ary noho izany dia takian’i  Jitu ny fampiatoana ny governemanta Uttar Pradesh  tarihan'i Mulayam Singh !
Rehefa ela ny ela, nanomboka ihany ny Indibloggies  ary raha mbola nafana izany, dia niresaka momba ireo ny olona rehetra, anisan'izany i Fursatiya !! Farany, taorian'ny fihodinana fanendrena sy fifidianana, dia notononina ny anaran’ireo mpandresy tamin’ny Indibloggies 2006 ka i Sameer Lal  (monina ao Kanada) no nahazo ny maripankasitrahan’ny Indic Blog (Hindi) Tsara Indrindra raha i Sunil Deepak  (monina ao Italia) sy i Priyaranjan Jha  (monina ao New Delhi) kosa no mpifaninana manaraka azy!! Vao haingana ihany koa izay i Lal Sameer no nahazo ny maripankasitrahan’ny Bilaogera Hindi Tsara Indrindra tanatinà tsapahevi-bahoaka nokarakarain'ny ekipa Tarakash . Manolotra ny arahaba avy amin’ny fo ho an'ireo mpandresy rehetra! 🙂 Toa tetidratsy nifanarahana ny fanomezana fankasitrahana ho an’ireo bilaogera NRI (“Non Resident Indian” na Indianina tsy Monina eto an-Toerana) mba hisarihana azy ireo hiditra anatin'ny Tontolon'ny Bilaogy Hindi !! 😉 😛
Ary mitohy ny fitantaran’i GK ny Mahabharat  satria mahatratra ny andro faharoany ny ady lehibe hifanatrehan’ny Tsara sy ny Ratsy .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/13/104226/
 lahatsorany vaovao ho avy: http://rachanabajaj.wordpress.com/2007/02/06/bhavishya-samaachaar/
 Yahoo ve no mamonjy ny Hindi sa ny Hindi no mamonjy ny Yahoo: http://aaina2.wordpress.com/2007/02/07/yahoo/
 Hindi Portal: http://www.jitu.info/merapanna/?p=658
 tsingerintaona feno fifaliana: http://neerajdiwan.wordpress.com/2007/02/08/jagjit-singh/
 Fitsipi-pitondrantena amin’ny Fitantanana Bilaogy sy ny Aretin’ny Tunnel Carpal: http://raviratlami.blogspot.com/2007/02/blog-post_09.html
 Fanontaniana Be Mpametraka momba ny fitantanana bilaogim-barotra: http://raviratlami.blogspot.com/2007/02/commercial-hindi-blog-faq.html
 naneho ny heviny momba ilay resaka: http://www.readers-cafe.net/nc/?p=126
 ankoatra ny Volana izahay tanatin'ny Apollo 8: http://antariksh.wordpress.com/2007/02/11/apolo8/
 ilay hazakazaka haingana indrindra vitan’ny olona (mandraka izany andro izany) tanatin'ny Apollo 10: http://antariksh.wordpress.com/2007/02/13/apolo10/
 ilay dingana lehibe tanatin'ny iraka Apollo 11: http://antariksh.wordpress.com/2007/02/14/apollo11/
 tataram-pitsidiako an'i Ajmer sy Pushkar: http://www.amitgupta.in/2007/02/11/in-the-land-of-brave-warriors-2/
 Andron'ny Mpifankatia sy ireo tranga ara-tantara mahaliana momba izany: http://rchindi.blogspot.com/2007/02/sains-day.html
 mahatratra ny andro faharoany ny ady lehibe hifanatrehan’ny Tsara sy ny Ratsy: http://sukhsagarse.blogspot.com/2007/02/blog-post_19.html